Rwizi Umvumvu kuChimanimani
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dziri kuyambira kuti nemamiriro akaita zvinhu munyika, Zimbabwe ikasabatsirwa nenyika dzekunze uye masangano anopa rubatsiro, inogona kutatarika kugadzirisa zvivakwa zvakaparadzwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vanoti pari zvino hurumende iri mubishi kumboyedza kubatsira vanhu kwete kutarisa zvakanyanya nyaya dzezvivakwa.
Asi mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, avo vari kutungamira mabasa rekubatsira vakawirwa nedambuidziko reCyclone Idai kuManicaland, vanoti zvichada mari yakawanda kugadzira zvakaparadzwa.
Mashoko aya atsinhirwawo nasachigaro webhodhi reZIMRA, VaCallisto Jokonya, avo vatiwo Zimbabwe inoda rubatsiro rwakanyanya kubva kana kune vekunze nekuti yoga mutoro wacho unorema.
VaJokonya vanoti hurumende ichaisa chikumbiro chekuti iwane mari inodarika mabhiriyoni matatu kuti igadzire zvivakwa zvakaparadzwa nemvura izvi.
Vaimbova gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vatiwo mari iri kuendeswa kunzvimbo dzakawirwa nedambudziko iri ishoma zvikuru uye zvinoburitsa pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvachose kubatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko.
Vamwe vanenge vave kutyira kuti mafuta ekufambisa dzimotokari achaita mashoma nekuda kwekuparadzwa kwemigwagwa inoenda kuBeira, kuMozambique, iyo inosvikira ngarava dzinotakura mafuta aya.
Asi gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, VaJoram Gumbo, vanoti vanhu havafanire kutya havo sezvo pombi inotakura mafuta aya isina kukuvadzwa zvakanyanya.
Asi vanopinza gorosi munyika, veGrain Millers Association, vanoti chingwa chinogona kunetsa sezvo migwagwa mizhinji yavanoshandisa kubva kuMozambique yakaparadzwa nemvuramupengo.
Magweta Anorwira Kodzeri dzeVanhu Oshushikana neMaitiro eMapurisa
Hurumende yaVaBoris Johnson Yoramba Yakamira neNyaya yeZvirango paZimbabwe
South Africa Yoongorora Kuti Mudzimai wemuZimbabwe Akabva kuChina Ane Chirwere cheCoronavirus Here
BAZ Yoshambadzira Mamwe Marezinesi eKutepfenyura
VaMnangagwa Vanoti POLAD Chete Ndiro Gungano Rinovandudza Nyika